माल्टर्वाइजिंग: यसले तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग अभियानको अर्थ के हो? | Martech Zone
सोमबार, डिसेम्बर 5, 2016 क्यारोलिन कालो
अर्को वर्ष डिजिटल मार्केटिंगका लागि रोमान्चक वर्षको रूपमा सेट गरिएको छ, अनलाइन परिदृश्यमा असंख्य अग्रणी परिवर्तनहरू सहित। इन्टरनेट अफ थिंग्स र भर्चुअल रियालिटीतर्फ अघि बढ्ने अनलाइन मार्केटिंगको लागि नयाँ सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ, र सफ्टवेयरमा नयाँ आविष्कारहरूले निरन्तर केन्द्र चरण लिइरहेका छन्। दुर्भाग्यवस, यद्यपि यी सबै घटनाहरू सकारात्मक छैनन्।
हामी मध्ये जसले अनलाइन काम गरिरहन्छौं जसले निरन्तर साइबर क्राइमिलहरूको जोखिमको सामना गर्दछ, जसले अथक प्रयास गरेर हाम्रो कम्प्युटरमा जानको लागि नयाँ तरिकाहरू खोज्छ र विनाशलाई तहसनहस पार्दछ। ह्याकर्स पहिचान चोरी गर्न र इन्टरनेटको उपयोग गरी परिष्कृत मालवेयर बढाउँछन्। मालवेयरको केहि पुनरावृत्तिहरू, जस्तै ransomware, अब तपाइँको सम्पूर्ण कम्प्युटर लक गर्ने क्षमता छ - एक प्रकोप यदि तपाइँसँग त्यहाँ महत्वपूर्ण समय सीमा र अमूल्य डेटा छ। अन्ततः यी समस्याहरूको संभावना ठूलो आर्थिक नोक्सानी पैदा गर्ने वा कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा शट डाउन गर्ने सम्भावना अब पहिलेको भन्दा बढि छ।
वेबको गहिराइमा धेरै ठूला-ठूला खतराहरू लुकेका छन्, यस्तो सजिलै हानि नपुगेको संक्रमणलाई बेवास्ता गर्न सजिलो हुन सक्छ, जस्तै माल्टर्भाइजिंगको एक टुक्रा - सही? गलत। मालवेयरको साधारण प्रकारको पनि तपाईंको डिजिटल मार्केटि campaign अभियानमा विनाशकारी प्रभाव पर्न सक्छ, त्यसैले यो आवश्यक छ कि तपाईं सबै जोखिम र उपचारहरूमा राम्रोसँग निपुण हुनुहुन्छ।
माल्वर्टिising्ग के हो?
मालवर्टिising्ग - वा खराब विज्ञापन - धेरै धेरै एक स्वयं व्याख्यान अवधारणा हो। यो एक पारम्परिक इन्टर्नेट विज्ञापनको रूपमा लिन्छ तर जब क्लिक हुन्छ, तपाईंलाई संक्रमित डोमेनमा ढुवानी गर्दछ। यसले फाईलहरूको भ्रष्टाचार वा तपाईंको मेसिनको अपहरणमा पनि परिणाम दिन सक्छ।
2009 देख्यो न्यूयोर्क टाइम्स वेबसाइटमा एक संक्रमण आगन्तुकहरू कम्प्युटरहरूमा आफैं डाउनलोड गर्नुहोस् र 'बहामा बोटनेट' को रूपमा परिचित भएको कुरा सिर्जना गर्नुहोस्; अनलाइन अनगिन्ती प्रतिबद्ध गर्न मेसिनहरूको नेटवर्क।
जबकि धेरैले माल्ट्राइजिंगलाई स्पष्ट रूपमा देखिने विश्वास गर्दछन् - किनकि यसले नियमित रूपमा बाहिरको ठाउँको पोर्न पप-अप वा बिक्री ईमेलहरूको रूप लिन्छ - वास्तविकता यो छ कि द्वेषयुक्त ह्याकरहरू बढ्ता चलाक बनिरहेछन्।
आज, तिनीहरू वैध विज्ञापन च्यानलहरू प्रयोग गर्दछन् र विज्ञापनहरू विश्वास गर्दछन् जुन प्रायः साइटलाई यो स aware्केत पनि हुँदैन। वास्तवमा साइबर अपराधकर्मीहरू अब आफ्नो शिल्पमा यत्तिको अग्रगामी भइसकेका छन कि उनीहरूले पीडितहरूलाई छलछाम गर्ने र रडारमुनि चिप्लन सक्ने उत्तम तरिका पहिचान गर्न मानव मनोविज्ञानको अध्ययन पनि गर्छन्।
यो दुर्भाग्यपूर्ण विकासको मतलब यो हो कि तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग अभियानले भाइरस अहिले नै बोक्न सक्छ, तपाईंले साकार पनि नगरीकन। यो चित्र:
यस्तो लागी कानूनी कम्पनी तपाईं पुग्छ र सोध्छ यदि तिनीहरूले तपाईंको वेबसाइट मा एक विज्ञापन राख्न सक्छन्। तिनीहरूले राम्रो भुक्तानी प्रस्ताव गर्दछ र तपाईं तिनीहरूमा शंका गर्ने कुनै कारण छैन, त्यसैले तपाईं स्वीकार्नुहोस्। के तपाईले महसुस गर्नुहुन्न, के यो विज्ञापनले तपाइँको आगन्तुकको अनुपात संक्रमित डोमेनमा पठाउँदैछ र तिनीहरूलाई बिना अनुभूति पनि भाइरस संकुचन गर्न बाध्य पार्दैछ। उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि उनीहरूको कम्प्युटरमा संक्रमित छ, तर कसैलाई शंका पनि छैन कि समस्या तपाईंको विज्ञापन मार्फत शुरू भएको हो, जसको मतलब तपाईंको वेबसाइटले मानिसहरूलाई संक्रमित गर्न जारी राख्नेछ जब सम्म समस्या एक झण्डा हुँदैन।
यो तपाईं हुन चाहानुहुने अवस्था होइन।
एक छोटो इतिहास
मालवेर्टाइज गरिएको छ एक धेरै स्पष्ट अपवर्धक पथ २०० its मा यसको पहिलो हेराई पछि जब कुनै एडोब फ्ल्यास प्लेयर जोखिमले ह्याकरहरूलाई माइस्पेस र रास्पोडी जस्ता साइटहरूमा उनीहरूको टेलोन खन्न अनुमति दियो। यद्यपि यसको जीवनकालमा केहि मुख्य बुँदाहरू भएको छ जसले हामीलाई यो कसरी विकसित भयो भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।
२०१० मा, अनलाइन ट्रस्ट एलायन्सले 2010 3500०० साइटहरू यस मालवेयरको रूपमा रहेको पत्ता लगाए। त्यस पछि, एक क्रस-उद्योग टास्क फोर्स सिर्जना गरियो र खतराको सामना गर्न।
२०१ 2013 मा याहूले एउटा आश्चर्यजनक माल्ट्राइजिंग अभियानमा हिट देखे जुन यससँग माथिको माथि उल्लिखित ransomware को प्रारम्भिक रूप को एक ल्यायो।
साइफोर्ट, एक प्रमुख सुरक्षा फर्म, दावी गर्दछ २०१ mal मा यो माल्टेराइजिंगमा j२325 प्रतिशत बृद्धि भएको छ।
२०१ In मा, यस निराशाजनक कम्प्युटर ह्याक मोबाइलमा गयो, किनकि म्याकफीले उनीहरूमा पहिचान गर्यो वार्षिक रिपोर्ट.
आज माल्टेराइजिंग भनेको डिजिटल जीवनको विज्ञापनको रूपमा मात्र हो। जसको अर्थ हो, एक अनलाइन मार्केटरको रूपमा, पछिल्लो जोखिमहरूको बारेमा आफूलाई सचेत गराउनु यो पहिलेभन्दा अझ महत्वपूर्ण छ।
यसले कसरी खतरा निम्त्याउँछ?
दुर्भाग्यवस, एक मार्केटरको रूपमा र एक व्यक्तिगत कम्प्युटर प्रयोगकर्ता, माल्टराइजिंगबाट तपाईंको धम्की दुई पट छ। सर्वप्रथम, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि कुनै संक्रमित विज्ञापनहरूले तपाईंको मार्केटिंग अभियानमा पग्गीब्याक गरेनन्। अक्सर, तेस्रो-पक्ष विज्ञापन अनलाइन पदोन्नति पछाडि एक मुख्य वित्तीय चालक हो र, जो कोही आफ्नो रोजगारको बारेमा भावुक हुन्छन्, यसको मतलब प्रत्येक विज्ञापन स्लट भर्न सब भन्दा बढी बिडर्सहरू खोज्नु हो।
यस कारणले, वास्तविक समय बिडिंग प्रयोग गरी विज्ञापन स्लटहरू प्रदान गर्ने खतराहरूको बारेमा सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ; यस केस स्टडी अनलाइन राजस्व उत्पन्न गर्ने यस युक्तिसँग सम्भावित समस्याको बारेमा विस्तृत दृश्य प्रदान गर्दछ। संक्षेप मा, यो दावी गर्दछ कि वास्तविक समय बोली - तपाइँको विज्ञापन स्लट को लिलामी - जोखिम को साथ आउँछ। यो हाइलाइट गर्दछ कि यो किनभने खरिद गरिएको विज्ञापन तेस्रो-पार्टी सर्भरहरूमा होस्ट गरिएको छ, वस्तुतः कुनै पनि नियन्त्रणलाई खारेज गर्दछ जुन तपाईं यसको सामग्रीमाथि हुनुहुन्छ।
त्यस्तै, एक अनलाइन मार्केटरको रूपमा, यो एक भाइरस आफैलाई संकुचनबाट बच्न आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग एक नक्कली सफा अनलाइन उपस्थिति छ भने पनि, मैला व्यक्तिगत सुरक्षा अभ्यासहरू तपाईंलाई बहुमूल्य काम डाटा हराउन सक्ने सम्भावना नै हुन्छ। जब पनि इन्टरनेट सुरक्षा को बारे मा छलफल, उच्च प्राथमिकता आफ्नो बानी हुनुपर्छ। हामी पोस्टमा यसलाई कसरी प्रबन्ध गर्ने भनेर कभर गर्ने छौं।
मालवेर्टाइजिंग र प्रतिष्ठा
माल्टेराइजिंगको सम्भावित खतराको बारेमा छलफल गर्दा धेरैले यसलाई किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण हो भनेर बुझ्न असफल गर्छन् - निश्चित रूपमा तपाइँ संक्रमित विज्ञापन हटाउन सक्नुहुन्छ, र समस्या हरायो?
दुर्भाग्यवस, यो नियमित रूपमा मामला हुँदैन। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू अतुलनीय रूपले चंचल छन् र ह्याक्सको खतरा बढ्दै जाने क्रममा उनीहरूको शक्तिले सबै थोक गर्दछन् जसले उनीहरूको शिकार हुनबाट जोगिन सक्छन्। यसको मतलब यो हो कि हामी केहि 'सर्वश्रेष्ठ केस परिदृश्य' कल गर्न सक्दछौं - अर्थात् स्पष्ट रूपमा मालिसियस पप-अप देखा पर्दछ र यसलाई कुनै नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना अघि हटाइन्छ - तपाईको मार्केटिंग अभियान अपरिवर्तनीय रूपमा लान सकिन्छ।
अनलाइन प्रतिष्ठा झन् झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ, र प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूले महसुस गरेको ब्रान्डलाई उनीहरूले गरेको पैसाको रूपमा विश्वास गर्छन् र महसुस गर्न सक्षम हुन चाहन्छन्। सम्भावित समस्याको थोरै चिह्नसमेत र उनीहरूले आफ्नो समय र पैसा लगानी गर्न कहिँ भेट्टाउँछन्।
कसरी आफूलाई सुरक्षित गर्ने
कुनै पनि राम्रो सुरक्षा ईन्जिनियरको मन्त्र हो: 'सुरक्षा उत्पादन होईन, तर प्रक्रिया हो।' यो प्रणालीमा बलियो क्रिप्टोग्राफी डिजाइन गर्नु भन्दा बढी हो; यसले सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजाईन गर्दै छ जुन सबै सुरक्षा उपायहरू, क्रिप्टोग्राफी सहित, सँगै काम गर्दछ। ब्रुस स्नेयर, अग्रणी क्रिप्टोग्राफर र कम्प्युटर सुरक्षा विशेषज्ञ
जबकि क्रिप्टोग्राफीले विशेष रूपमा माल्टेराइजिंगलाई रोक्न केही गर्न सक्दछ, यो भावना अझै प्रासंगिक छ। यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न असम्भव छ जुन लगातार उत्तम सुरक्षा प्रदान गर्दछ। तपाईले उत्तम टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुभएता पनि, त्यहाँ अझै पनि घोटालाहरू छन् जसले प्रयोगकर्तालाई नभई कम्प्युटरलाई लक्षित गर्दछ। वास्तवमा तपाईलाई चाहिने कुरा के हो सुरक्षा प्रोटोकल, जुन एकल प्रणाली भन्दा नियमित रूपमा समीक्षा र अपडेट गरिन्छ।
यी निम्न चरणहरू माल्टेराइजिंगको बढ्दो बढ्दो समस्याको सामना गर्न तपाईंलाई सहयोग गर्न सबै महत्त्वपूर्ण छन्।
आफूलाई मालवरिजाइजबाट जोगाउँदै
स्थापना एक व्यापक सुरक्षा सूट. त्यहाँ धेरै उत्कृष्ट सुरक्षा प्याकेजहरू उपलब्ध छन्। यी प्रणालीहरूले तपाइँको मेसिन मा नियमित चेक अप प्रदान गर्दछ र रक्षा को पहिलो लाइन प्रदान गर्छ यदि तपाइँ एक भाइरस को करार गर्नुहोस्।
स्मार्ट क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं नियमित रूपमा अनलाइन काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले फेला पार्नुहुने प्रत्येक विज्ञापन लिंकमा क्लिक गर्दा मूर्खतापूर्ण हुन्छ। विश्वसनीय साइटहरूमा टाँसिनुहोस् र तपाईंले आफ्नो संक्रमणको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्नुहुनेछ।
विज्ञापन-अवरोधक चलाउनुहोस्। विज्ञापन-ब्लक चल्दा तपाइँले देख्नुहुने विज्ञापनको मात्रा कम गर्दछ र त्यसकारण, तपाइँलाई संक्रमितमा क्लिक गर्नबाट रोक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यी कार्यक्रमहरू केवल ईन्ट्रुसिभ विज्ञापनको लागि मात्र पूरा गर्दछन्, केहि अझै पछाडि सर्न सक्छन्। त्यस्तै, डोमेनहरूको बढ्दो संख्याले उनीहरूलाई पहुँच गर्ने क्रममा विज्ञापन-ब्लकको प्रयोग रोक्दछ।
फ्ल्यास र जाभा असक्षम गर्नुहोस्। यी प्लग-ईनहरू मार्फत मालवेयरको एक ठूलो मात्रा अन्त कम्प्युटरमा डेलिभर हुन्छ। तिनीहरूलाई हटाउँदा तिनीहरूको असुरक्षाहरू पनि हटाउँदछ।
तपाईंको डिजिटल अभियानलाई मालवेर्टाइजबाट बचाउँदै
एन्टिभाइरस प्लग-इन स्थापना गर्नुहोस्। विशेष रूपमा यदि तपाईं मार्केटिंगको लागि WordPress साइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ छन् धेरै उत्कृष्ट प्लग-ईनहरू त्यहाँ बाहिर समर्पित एन्टि भाइरस सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ।
होस्ट विज्ञापनहरू ध्यानपूर्वक vet। सामान्य ज्ञान प्रयोग गरेर, यो पत्ता लगाउन सजिलो हुन सक्दछ यदि तेस्रो-पार्टी विज्ञापनहरू अलि अलि छायादार छन्। यदि तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ भने सावधानीपूर्वक तिनीहरूलाई बन्द गर्न नडराउनुहोस्।
तपाइँको प्रशासक प्यानल लाई सुरक्षित गर्नुहोस्। चाहे त्यो सामाजिक मिडिया हो, तपाईंको वेबसाइट वा तपाईंको ईमेलहरू, यदि कुनै ह्याकरले यी कुनै पनि खाताहरूमा प्रविष्टि प्राप्त गर्न सक्दछ भने, त्यसो भए तिनीहरूलाई मालिसियस कोड इन्जेक्सन गर्न सजिलो हुनेछ। तपाईंको पासवर्डहरू जटिल र सुरक्षित राख्नु यसको विरुद्ध तपाईंको उत्तम बचाव हो।
रिमोट सुरक्षा। असुरक्षित सार्वजनिक वाइफाइ नेटवर्कहरू मार्फत तपाईंको खाताहरूमा साइबर क्रिमिनलहरूले पहुँच गर्न सक्ने सम्भावित जोखिम पनि छ। भर्चुअल निजी नेटवर्क (VPN) को प्रयोग गर्दा बाहिर र लगभग तपाईं र VPN सर्भर बीच एक सुरक्षित प्रारम्भिक जडान सिर्जना गरेर तपाईंको डाटा ईन्क्रिप्ट हुनेछ।
मालवर्टिising्ग सबै अनलाइन मार्केटरहरूको लागि निराशाजनक चिन्ता हो; एउटा जुन कुनै पनि समयमा कुनै पनि समयमा चाँडै जाँदै जस्तो देखिदैन। भविष्यमा मालवेयरको हिसाबले के हो भनेर हामी कहिले पनि थाहा पाउँदैनौं, हैकर्सको अगाडि हामी उत्तम रहन सक्दछौं राम्रो साथीहरू भनेको हाम्रा कथाहरू र सल्लाह साथी साथीहरूसँग साझेदारी गर्न जारी राख्नु हो।
यदि तपाईंसँग मालव्टेराइजिंग वा डिजिटल मार्केटिंग सुरक्षाको कुनै अन्य तत्त्वहरूको अनुभव छ भने, तल एक टिप्पणी छोड्नुहोस्। तपाईका विचारहरु लाई एक लामो मार्ग को लागी मद्दत गर्न को लागी एक धेरै सुरक्षित अनलाइन भविष्य बजारहरु र प्रयोगकर्ताहरु लाई एकै साथ बनाउन को लागी हुनेछ।
क्यारोलिन एक लेखक र सामग्री बजारका हुन् सुरक्षित विचारहरू। इन्टर्नेट सुरक्षा मा विशेषज्ञता, उनी नोक्सानबाट सकीकी छ कि मालवेयरले तपाईको अनलाइन अभियानमा गर्न सक्ने क्षतिको बारे। उनी अनलाइन धम्कीहरू र वेबसाइटहरू र पदोन्नति रणनीतिहरूको अपहरणको लागि ह्याकरहरूको सम्भावितमा राम्रोसँग परिचित छिन्। एक अनुभवी मार्केटरको रूपमा, उनी आफ्नो अनुभव समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूसँग इन्टरनेटलाई अझ सुरक्षित स्थान बनाउन बाँड्न उत्सुक छिन्।